अबको यात्रा ठूलो पर्दातिर : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed अबको यात्रा ठूलो पर्दातिर
अबको यात्रा ठूलो पर्दातिर
हेक्कै राख्नुपर्दा निराजनको जन्म सन् १९८६ भयो । सानैदेखि कलाकारितामा रुचि पालेका उनमा गायक बन्ने ठूलै धोको थियो । तर, आज उनी स्वर होइन, अभिनयका कारण दर्शकमाझ प्रिय बन्दै छन् । उनलाई अचेल म्युजिक भिडियोमा मोडल नायक का रूपमा देख्न सकिन्छ
माटो खेल्दै हुर्केको ठिटोको कथा बुनिँदै छ, यहाँ । तनहुँ भिमाद गाउँको एउटा परिवारको पेसै थियो, किसानी । कुटोकोदालोसँगै लपक्कै भिजेको त्यो परिवारमा जन्मिए, निराजन प्रधान । आज उनको अनुहार काँचको पर्दामा नदेख्नै कमै होलान् ।
हेक्कै राख्नुपर्दा निराजनको जन्म सन् १९८६ भयो । सानैदेखि कलाकारितामा रुचि पालेका उनमा गायक ठूलै धोको थियो । तर, आज उनी स्वर हैन, अभिनयका कारण दर्शकमाझ प्रिय बन्दै छन् । उनलाई अचेल म्युजिक भिडियोमा ‘मोडल नायक’का रूपमा देख्न सकिन्छ ।
हरेक ‘अफर’ अनुभव सँगालेर दरो ‘प्लटफर्म’मा आफूलाई उभ्याएका छन्, निराजनले ।
‘अझै पनि गायक बन्ने सपना मेरेको छैन,’ ‘ह्यान्सी’ देखिने निराजन सुनाउँछन्, ‘एकदिन आफ्नै स्वरमा गीत रेकर्ड गर्नेछु ।’
उनको बाल्यकाल काठमाडौंमै बित्यो । यहीँको हावापानी र संगतले कलाकारिता क्षेत्र उनका लागि न्यानो बन्दै गएको छ ।
२०६८ सालतिर पहिलोपटक नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको महोत्सवमा भाग लिएका थिए, निराजनले । साथीभाइको आग्रहमा भाग लिएको महोत्सवमा ‘उत्कृष्ट’ कोटीमा परे । त्यसपछि उनको यात्रा औपचारिकतातिर ढल्किन थाल्यो । ‘त्यसपछि मेरो कलायात्रा निरन्तर जारी छ,’ भन्छन्, ‘अब यसैमा जम्ने योजना बनाएको छु ।’
म्युजिक भिडियोमार्फत उदाएका प्रतिभा हुन्, निराजन । म्युजिक भिडियोमा चाख राख्ने जोकोहीले उनको प्रतिभाको मूल्यांकन गरेकै हुनुपर्छ ।
कला क्षेत्रमा करिब दशकदेखि उनको निरन्तरता जारी छ । म्युजिक भिडिओमार्फत चर्चा कमाएका उनको अब भने फिल्मी दुनियाँमा देखिने धोको छ । हुन पनि ‘तिमीसँगै हुने मन छ’मार्फत नायकका रूपमा ‘डेब्यु’ गर्दै छन्, निराजन ।
यी व्यस्त मोडल ‘करिअर’को आठ वर्षमा हजारभन्दा बढी भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् । ‘यिनै अनुभव अब फिल्ममा उपयोग गर्ने सोचमा छु,’ उनी भन्छन् । ‘थिउटर क्रियटर’ अनुप बरालबाट अभिनय प्रशिक्षणसमेत लिएका छन्, निराजनले ।
पहिलो म्युजिक भिडियो निर्देशक आलोक नेम्वाङबाट थालेका उनी त्यो क्षण कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । ‘दाइले मलाई लिन्न भन्दा पनि ८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनुभएको थियो,’ उनले सम्झिए, ‘त्यो अफर र पारिश्रमिक मेरो लागि वरदान साबित भएको छ ।’ अधिकांश निर्देशक तथा नयाँ पुस्ताका वर्षा राउत, केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, स्वतिमा खड्कालगायतसँग काम गरिसकेका छन्, उनले । ‘मलाई काम गर्ने अवसर नजुरेको भनेको नम्रता श्रेष्ठसँग मात्र हो,’ उनले भने, ‘उहाँसँग अभिनय गर्ने ठूलो धोको छ ।’
मोडल निराजनको पहिलो चर्चित म्युजिक भिडियो ‘लभ ट्रेजिडी’मा आधारित थियो । गायक प्रकाश तिमल्सिनाको ‘खल्ली’ नामक भिडियोमा उनले नायिका वर्षा राउतसँग अभिनय गरेका थिए ।
पछिल्लो समय गायक शिव परियारको ‘नभेटी नभेटी’ मानायिका स्वस्तिमा खड्कासँग अभिनय गरेका छन् । जुन, अहिले पनि चर्चामै छ । जसमा लाखौं दर्शकले उनको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् ।
‘दिल तोडेर गयौं,’ राजेश पायल राईको ‘अर्खौली बजार’लगायत उनी अभिनित म्युजिक भिडियो हुन् । मिहिनेत र अनुशासनमा रहेर काम गर्न रुचाउने निराजनले म्युजिक भिडियोमा धेरै वर्ष काम सुखदुःख अनुभूत गरे । कुनैबेला ८ हजार पारिश्रमिकमा काम गरेका उनी अहिलेका महँगा मोडलमध्ये हुन् । एउटा म्युजिक भिडियोमा १ लाखसम्म लिन्छन्, उनी ।
सन् २०१७ मा ‘नेपाल म्युजिक अवार्ड’ (पोस्ट मोडल मेल मोर्डन एवं पप ), सन् २०१८ मा ‘सुन्दरतादेवी पब्लिक च्वाइस अवार्ड, सन् २०१८ मा ‘बक्स अफिस म्युजिक भिडियो अवार्ड’ र सन् २०१९ मा ‘नेपाल भाषाको म्युजिक भिडियो अवार्ड’ उनको पोल्टामा परिसकेका छन् । निराजन कर्पोरेट विज्ञापनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । अभिनयमा रुचाइएका मोडल उनलाई धेरै दर्शकले ठूलो पर्दामा हिरोका रूपमा हेर्न चाहेका पनि छन् ।
डा. रबिन्द्र पाण्डे भन्छन् ‘आगामी तीन हप्ता अत्यान्त कठिन अवस्था’
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद डा. रविन्द्र पाण्डेले आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश प्रवाह गर्दै...
आज बुद्ध जयन्ती : कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन, दीप प्रज्वलन गरिने
रुपन्देही । आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् २५६५औँ बुद्धजयन्ती । भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रूपमा जन्म लिनुभएका सिद्धार्थ गौतमप्रति श्रद्धा व्यक्त गरी मनाइँदै छ...
राजनीति Dhruba Lamsal - June 28, 2020 0
पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारण र उपचार विधि
नेपालमा प्रत्येक दुई घर विराएर अर्थात हरेक १० जनामा एक जना क्यान्सर रोगी हुन सक्ने अनुमान छ । अस्पतालको तथ्यांक हेर्दा भने प्रत्येक १...
Exclusive Kumar Raut - July 24, 2020 0
मनाङको आगो अझै नियन्त्रण बाहिर
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - January 30, 2021 0
मनाङ । गत मङ्सिर ११ गतेदेखि लागेको आगो निभ्न नपाउँदै नासो गाउँपालिका रहेका जङ्गलमा आगो बलिरहेको छ । मनाङको ताचैमा लागेको आगो दुई दिनदेखि...
चितवनमा वृद्धाको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि
Breaking News Sushila Bishwokarma - September 11, 2020 0
चितवन । पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक वृद्धाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका–२ की ७८ वर्षीया महिला रहेकी छन्...
Exclusive Sushila Bishwokarma - September 17, 2020 0
बिचार Kumar Raut - August 11, 2020 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - March 18, 2021 0
काठमाडौं । हालसम्म कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप लगाउन योग्यमध्ये ७ प्रतिशत बढी नागरिकले खोप लगाएका छन् । सरकारले कुल जनसंख्यामध्ये २ करोड १७ लाख ५६...
विप्लव नेता अनिल शर्मा अस्पतालबाटै पक्राउ
भर्खरै Dhruba Lamsal - May 5, 2020 0
काठमाडौं । विप्लव समूहका पोलिट्ब्यूरो सदस्य अनिल शर्मा विरही अस्पतालबाटै पक्राउ परेका छन् । चितवनको रत्ननगर वडा नं ५ घर भएका नेता शर्मा भ-याङबाट लडेपछि...
सुस्मिता श्रेष्ठ - June 22, 2021